Daryeel Caafimaad - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Daryeel Caafimaad - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Daryeelka Dhaqanka Qoyska
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay bixisaa booqashooyinka caafimaadka sanadlaha ah ee dhallaanka, carruurta, iyo dadka waaweyn iyo sidoo kale dhammaan adeegyada ka-hortagga ee ay bulshadeennu u baahan tahay inay caafimaad qabaan:
Jirka jirka oo da 'kasta leh
Baadhitaannada afka ilmo-galeenka (PAP) oo wata dabagal aan caadi ahayn oo ah PAP iyo colposcopy
Tijaabada baarista kansarka mindhicirka ee aad ku sameyn karto guriga iyo u-diritaanka koobiga korantada
Tixraacyada baarista kansarka naasaha
Baadhitaanka niyad-jabka, isticmaalka maandooriyaha, iyo cilado-la’aanta koriinka
Maareynta culeyska caafimaadka leh ee carruurta iyo dadka waaweyn
Baadhitaanno ku saabsan sonkorowga, dhiig karka, iyo kolestaroolka
Baadhitaanada cudurrada faafa sida cagaarshow iyo qaaxada
Baadhitaannada cudurrada galmada lagu kala qaado
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay bixisaa dhammaan talaalada lagula taliyay carruurta iyo dadka waaweyn waxayna kaqeyb qaatan Barnaamijyada Tallaalka ee Carruurta in lagu bixiyo tallaalada lacag-la'aana ee carruurta aan caymiska ku jirin ama aan caafimaadkoodu hooseeyn.
Booqashooyinka carruurta iyo booqashada bukaanka waxaa loo heli karaa bukaanada carruurta ah oo ay bixiyeen Daryeelka Dhaqanka Qoyska iyo bixiyayaasha carruurta.
Booqashooyinka Dhakhaatiirta Sanadlaha ee Medicare
Waxaan bixinnaa “Booqashooyinka Caafimaadka Fiican ee Sanadlaha ah” dhammaan bukaannada Medicare. Booqashooyinkan fayoobaanta ayaa loo heli karaa dhammaan bukaannada Medicare oo aan wax lacag ah ku lahayn bukaanka.
Jirdhiska loogu talagalay Iskuulka, Cayaaraha, Shaqada, iyo Wadayaasha
Bukaan-socodka ayaa jadwal u sameyn kara jadwal joogto ah ama ballamo maalin isku mid ah oo loogu talagalay iskuul, isboorti, shaqo iyo jimicsi wadista. Hada ma bixinayno laysanka darawalnimada ganacsiga (CDL) baaritaano jidheed.
Bixiyeyaashayada caafimaadku waxay u qalabaysan yihiin inay daryeelaan xaaladaha dabadheer, sida sokorowga, dhiig karka, cudurka wadnaha, iyo inbadan.
COVID-19 Tijaabinta, Tallaalka, & Macluumaadka Badbaadada
Bixinta ballanta COVID-19 iyo imtixaanka
Bixiye Xarunta Caafimaadka ee Lancaster ayaa hubin doona astaamahaaga inta lagu jiro ballanka iyo haddii ay kugu amraan baaritaan COVID-19 inaad adigu qaadatid, kharashka ballanta iyo baaritaanka COVID-19 ayaa caymiskaaga caafimaadka bixin doona 100%.
Haddii aadan haysan caymis caafimaad, ma bixin doontid kharashka ballanta iyo baaritaanka COVID-19.
Waxbadan ka akhriso tallaalka COVID-19 halkan
Khibrad caafimaad oo aamin ah bukaanka
Waxaan sii wadi doonnaa inaan daryeelo qoysaskeena, asxaabta, iyo deriskeena oo leh calaamadaha COVID-19, waxaanna abuurnay khibrad bukaan oo badbaado iyo badbaado leh iyadoo:
Haysashada maaskaro iyo gacmo nadiifiye leh oo diyaar u ah booqasho kasta oo qof-qof ah
Dejinta goobo xafiisyadeena ah oo ay la kulmaan tilmaamaha fogeynta bulshada
Nadiifinta, jeermiska, iyo fayodhowrka goobaha daryeelka bukaanka si joogto ah oo dhammaystiran
Sii wadida baarista qandhada, astaamaha, iyo xiriirka dhow ee lala yeesho dadka kale ee laga helay cudurka COVID-19
Furitaanka Xarunta Caafimaadka Reynolds ee Xarunta Caafimaadka si loogu baaro caruurta iyo talaalada
Bixinta booqashooyinka daryeelka bukaanka ee kahortagga iyo kahortaga iyada oo loo marayo telehealth iyada oo ku saleysan baahiyo caafimaad oo gaar ah
Raadinta la xiriirta iyo sida la isugu keliyeeyo qoys ballaaran
Haddii aad ku tijaabisay cudurka 'COVID-19' - Xarunta Caafimaadka Lancaster ayaa ku soo wici doonta oo kaala hadlaysa sida aad dareemayso iyo waxa aad samaynayso xiga. Sidoo kale waad isku hallayn kartaa inaad dib u soo wacdo oo aad caafimaadkaaga iska hubiso intaad ka bogsato. Intaa waxaa sii dheer, waxaan kaa caawin doonaa inaad la timaado liiska asxaabta, qoyska, ama deriska aad xiriirka dhow la lahayd ka hor intaan astaamahaagu bilaaban si aan ugu wargalinno inay la kulmeen COVID-19. Tan waxaa loo yaqaan "raadinta xiriirka." Ma siin doonno magacaaga ama macluumaadkaaga.
Haddii aad tijaabisay cudurka 'COVID-19' oo aad ku nooshahay guri ballaaran - Haddii aad awoodid, isticmaal qol iyo musqul ka gaar ah kuwa kale ee qoyskaaga. Haddii aad u baahan tahay inaad isticmaasho aag guud sida jikada ama qolka fadhiga, xiro maaskaro, ka fogow 6 fuudh xubnaha qoyska oo dhan, jeermisna dusha wixii aad taabato.
Haddii aad xiriir dhow la leedahay qof laga helay cudurka COVID-19 - Xarunta Caafimaadka Lancaster ayaa ku soo wici doonta oo kaala hadli doonta sida aad dareemeyso iyo waxa xiga ee aad sameyn karto. Sidoo kale waad isku hallayn kartaa inaad dib u soo wacdo oo aad caafimaadkaaga iska hubiso intaad ka bogsato.
Xagee Loo Raadiyaa Daryeel
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Daryeelka Hooyada-Dhalmada & Caafimaadka Haweenka ee Ku-Meel-Gaarka Ah Qoyska waxaa hogaamiya kooxdayada bixisa horumarka iyo khibradda leh ee bixiyeyaasha. Kooxaheenna daryeelka waxay bixiyaan daryeel caafimaad oo balaaran, waxbarasho, iyo latalin inta lagu jiro da 'badan iyo marxaladaha nolosha haweeneyda, iyo inta lagu jiro koritaanka qoysaskooda.
Xarunta Caafimaadka Lancaster waxay dhexgashaa jirka, maskaxda, iyo wadnaha adoo siinaya adeegyo caafimaad habdhaqan ah kooxdaada Daryeelka dhexdeeda ah.
Waxaan ku siineynaa Qiimeynta Cilmi-baarista Cilmi-baarista iyo Adeegyada Maareynta Daawooyinka bukaannada leh Bixiye Daryeel Koowaad iyo Kooxda Daryeelka halkan Lancaster Health Center. Dhaqtarkayaga Kalkaaliyaha Caafimaadka Maskaxda wuxuu si wada jir ah ula shaqeeyaa Kooxdaada Daryeelka, oo ay ku jiraan Bixiyahaaga Daryeelka Aasaasiga ah iyo La Taliyaha Caafimaadka Hab dhaqanka.
Intaa waxaa sii dheer, kooxdayada La-Taliyaha Caafimaadka Hab-dhaqanka waxay bixiyaan waxqabadyo gaaban iyo la-talin muddo-gaaban ah oo ku saabsan niyad-jabka, walwalka, iyo xaaladaha kale ee caafimaadka habdhaqanka.
Gudbinta waxaa loo heli karaa adeegyo la-talin oo ballaadhan iyo kuwa muddada-dheer ah oo bulshada dhexdeeda ah.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay bixisaa baaritaanno caafimaad, talaal, iyo daryeel dabagal ah oo loogu talagay qaxootiga dhowaan yimid, asley-ga, iyo muhaajiriinta ee ku sugan jawi dhaqan ahaan laqabsanaya iyadoo la adeegsanayo adeegyada turjubaanka. Waxaan bixinaa qaab loo wada dhan yahay siinta adeegyada daryeelka caafimaad oo ka turjumaya dhaqamada, qiimayaasha, iyo baahiyaha shaqsiyaadka aan u adeegno.
Isticmaalka Maandooriyaha Daaweynta
Iyadoo lala shaqeynayo Mashruuca RASE, waxaan siinnaa ikhtiyaarrada daaweynta-caawinta daawada bukaanka qaba ku tiirsanaanta daawada opioid / maandooriyeyaasha. Fursadaha daaweynta waxaa ka mid ah Suboxone, Subutex, iyo Vivitrol.
La-hawlgalayaasha Xarunta Caafimaadka ee Lancaster oo ay weheliso Barnaamijka Kalkaalinta Kulliyadaha Bulshada ee Harrisburg ee Xaruntayada New Holland Avenue si ay ugu fidiso waxbarasho bukaan-socod bilaash ah oo ku saabsan mowduucyo / xaalado caafimaad oo badan. Ardayda kalkaalinta caafimaadku waxay la wadaagaan bukaanka si ay u horumariyaan caadooyin caafimaad qaba si ay ula kulmaan himilooyinka caafimaad ee qof walba.
Sanduuqa Farmashiga Farmashiyaha Iyo Adeegsiga 340B Keydinta